Somalia iyo Masar oo heshiis kala saxeexday | Berberanews.com
Home WARARKA Somalia iyo Masar oo heshiis kala saxeexday
Somalia iyo Masar oo heshiis kala saxeexday
Qahira(Berberanews):- Wasiirrada Caafimaadka dalalka Soomaaliya iyo Masar Drs. Foosiya Abiikar iyo Drs Hala Zaid, ayaa Caasimadda Masar ee Qaahira ku kala saxiixday heshiis baratakool iskaashi oo u dhaxeeya wasaaradaha caafimaadka ee labada waddan.
Heshiiskaan ay labada Wasiir kala saxiideen uu ka tarjumayaa hogaanka suuban ee madaxda dalalka Soomaaliya iyo Masar si loo sii horumariyo cilaaqaadka labada dal gaar ahaan sidii Wasaaradda Caafimaadka Somaaliya ay dowladda Masar ugu taageeri laheyd horumarinta Caafimaadka ee dhinaacyada badan leh.
Wasiirada Caafimaadka Masar Drs Hala Zaid ayaa markii qalinka lagu duugay heshiiskaasi hadal gaaban ay halkaa ka jeedisay waxa ay sheegtay inay dowladeeda ay la garab taagan tahay Jamhuuriyadda Soomaaliya u gudbinta waaya aragnimada iyo khibrada dhanka caafimaadka.
Waxay sheegtay inay u soo diri doonto Muqdisho khubaro ah ku takhasxusay dhanka caafimaadkaka kana shaqeeya daraasad dhanka gargaarka deg-dega ah iyo dhammaan arrimaha hawlaha caafimaadka la xiriira, kuwaas oo isla maarkaana kormeera nidaamka iyo wacyiga caafimaadka dalka gaar ahaan daryeelka Hooyada iyo dhallaanka Soomaaliya.
Previous articleCaynaba: Laba ruux oo u geeriyooday Xanuunka Gawracatada
Next articleEthiopian Airlines oo ku dhawaaqday mowqifkeeda ku aaddan shirkadda Boeing